कसरी एक WhatsApp कुराकानी पठाउन / आईफोनमा ईमेल द्वारा कुराकानी ग्याजेट समाचार
त्यहाँ समय हुन्छ, यो प्रायः घट्दैन, त्यो एनम तपाईंलाई WhatsApp मार्फत "गहिरा" कुराकानीको लागि दिन्छु। गहिरो मेरो मतलब यो हो कि हामी हाम्रो कुराकानी साझेदारबाट महत्त्वपूर्ण डाटा लेखिरहेका छौं वा पढ्दै छौं वा कागजात लेख्न प्रयोग गर्न सकिने जानकारी प्रदान गर्दैछौं वा हामी यसलाई भण्डार गर्न चाहान्छौं ताकि हामी सम्पूर्ण कुराकानीमा परामर्श र खोजी नगरीकन पहुँच गर्न सक्दछौं। जब हामी यो राख्छौं।
भाग्यवस हामीसँग अनुप्रयोगबाट नै विकल्प छ, अनुच्छेद द्वारा अनुच्छेद प्रतिलिपि नगरीकन यी कुराकानीहरू मेल मार्फत पठाउन सक्षम हुन पछि यसलाई नोटपैडमा वा अन्य कुनै अनुप्रयोगमा टाँस्न जुन हामी आईफोनमा छ। तल हामी तपाइँलाई यी सबै कुराकानीहरू ईमेल मार्फत पठाउन सक्षम हुनको लागि अनुसरण गर्नका लागि सबै चरणहरू देखाउँदछौं तिनीहरूलाई व्हाट्सएप च्याटको माध्यमबाट तिनीहरूको खोजी नगरी नै द्रुत रूपमा पहुँच गर्न।
अनुसरण गर्न चरणहरू:
पहिलो र आधारभूत कदम हो व्हाट्सएप अनुप्रयोग खोल्नुहोस्.
दोस्रो, हामीले माथि जानु पर्छ ट्याब जहाँ सबै कुराकानीहरु देखाइएको छ जुन हामीसँग अहिले खुला छ।
अब हामीले च्याट भेट्टाउनु पर्छ जुन हामी ईमेल र द्वारा पठाउन चाहान्छौं यसमा तपाईंको औंलालाई बाँया सार्नुहोस्.
दुई विकल्प देखा पर्नेछ: अधिक र मेटाउनुहोस्। यदि हामी मेट्न क्लिक गर्‍यौं भने, हामीले अनुप्रयोगमा बचत गरेका सबै कुराकानीहरू मेटिने छन्। यदि हामी क्लिक गर्दछौं अधिक, अनुप्रयोगको तल एक मेनू तलका विकल्पहरूको साथ देखा पर्नेछ: सम्पर्क जानकारी, ईमेल कुराकानी, र कुराकानी मेटाउनुहोस्।
हामीले दोस्रो विकल्प छनौट गर्नु पर्छ जुन मेलबाट कुराकानी पठाउनुहोस्। एक नयाँ मेनू प्रदर्शित हुनेछ जहाँ यसले हामीलाई सोध्यो यदि हामी सबै संलग्न फाईलहरू संलग्न गर्न चाहन्छौं वा हामी कुराकानीमा लेखिएको पाठ पठाउन चाहन्छौं।
यदि हामी फाईलहरू संलग्न गर्न चयन गर्दछौं, एप्लिकेसनले डिफल्ट ईमेल क्लाइन्ट खोल्नेछ, यस अवस्थामा मेल र .txt ढाँचामा फाईल सिर्जना गर्दछ जहाँ सबै कुराकानीहरू भेटिने छन्। छविहरू र ध्वनि फाईलहरू ईमेलमा जोडिएको तल्लो भागमा देखा पर्नेछ।
यदि हामी अनुलग्नकहरू बिना नै कुराकानी पठाउन चाहन्छौं, मेल अनुप्रयोग खुल्नेछ र कुराकानीहरू यसको साथ संलग्न हुने .txt फाइलमा संलग्न हुनेछन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » सफ्टवेयर » कसरी आईफोनमा कुराकानी / कुराकानी ईमेल मार्फत पठाउन
विकल्प मेल मार्फत कुराकानी पठाउन, मैले पाउँदिन।